UPDATE: Faah-faahin dheeraad ah dagaalkii Marka oo uu ku wajahanyahay RW Kheyre & Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
Marka (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahin dheeraad ah ka soo baxaysa dagaal xooggan uu ka dhacay duleedka Magalada Marka ee Gobolka Shabeellaha Hoose, kaasi oo u dhexeeyay maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab iyo ciidamada militariga Soomaaliya.
Dagaalka ayaa ka dambeeyay kadib markii ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya ay weerar ku qaadeen fariisin ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka deegaanka Jilib Marka ee gobalka shabeellada Hoose.
Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay dagaalka uu khasaaro xoogan soo gaaray dhinacyadii ku dagaalamay duleedka magaalada Marka ee gobalka Shabeellada hoose.
Inta la ogyahay 5 qof ayaa ku geeriyootay oo ahaa dhinacyadii dagaalka ku dhex maray duleedka magaalada Marka, halka tiro intaasi ka badana ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegayaan dadka deegaanka.
Ilaa iyo hadda ma jiraan weli wax faahfaahin ah oo ka soo baxay militariga Soomaaliya, kaasi oo ku aadan in ay ka warbixiyaan dagaalkii xalay ka dhacay deegaanka Jilibka marka ee gobalka Shabeellada Hoose.
Sidoo kale, wararka naga soo gaaraya magaalada Marka ayaa sheegaya in Jimcihii maanta ciidamada xooga ay dhaq dhaqaaqyo ka wadaan duleedka Magaalada Marka ee Gobalka Shabeellada Hoose, maadaama halkaasi uu ku wajahan yahay Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali kheyre.